नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : तिम्रा स्वार्थले भरपुर सत्ता तिमीलाई मुवारक !
तिम्रा स्वार्थले भरपुर सत्ता तिमीलाई मुवारक !
- श्याम केसी रोल्पाली
म रोल्पा लाई अथाह माया गर्छु । मेरो मुटु मै रोल्पा छ। म मर्ने बेलामा पनि रोल्पाली भएर मर्न पाँउ! रोल्पाले नेपाली इतिहासमा ठुलै बिरासत बोकेको छ। चाहे त्यो राम्रो कामले होस या नराम्रो ! चाहे त्यो भाषणले होस या आश्वासनले! रोल्पा सधैं चर्चा को शिखर मा पुगि रहन्छ ! कहिले माओबादीको उदगम स्थल बनेर त कहिले देशकै कथित राजधानी बनेर ! कहिले नक्कली कम्युन स्थापना गरेर त , कहिले ओलीको नजरमा बहुदलै नआएको जिल्ला घोषणा भएर ! आदि इत्यादी कुराहरुले खुबै चर्चित हुन्छ ! तर बिडम्बना त्यहाँका सोझा ईमान्दार जनताहरु सधै उपेक्षामा परिरहन्छन! ठगिई रहन्छन् बिचराहरू !
हिजोको त्यो कथित जनयुद्धको दशकमा दश बर्षका बालक देखी बुढाबुढी सम्म लाई युद्धमा होम्याइयो !उनिहरुलाइ ठुला र मिठा मिठा सपनाहरु देखाइयो । सदियौ देखी चरम गरीबीले सेकेको नियति लाई समाप्त पार्ने र बिभेदको खाल्डो लाई समाप्त गर्ने र हरेकले गास,बास र कपास पाउने आशामा ति सोझा जनता कथित जनयुद्ध लडेका थिए । तर आज के भयो ? ति युद्धका हिमायतिहरु जनयुद्धलाई धनयुद्धमा बदलेर भसष्मासुर भए । झुटा सपना
देखाउदै निर्दोष जनतालाई कथित जनयुद्धमा भष्म बनाए। ज्यूँदाहरु पनि आफैले फलाकेका बिचार सिद्धान्त लाई तिलाञ्जली दिदै ,देश र जनताको दोहन गर्दै धर्ती माताको भार बनेर बाँचिरहेका छन्।
कसरी जिउँदै छन त्यो उनिहरूको आत्मालाई पनि थाहा नै होला !
एका तर्फ हिजो रोल्पालीलाई सपना देखाउनेहरू युरोपियन अमेरिकन जीवनशैलीमा बाँचिरहेका छन्। अर्को तर्फ आज हरेक रोल्पालिहरु रगतको आंशु पिएर बाचिरहेका छन । देशको हरेक गल्ली गल्लीमा रोल्पालि बालबालिका देखी बृद बृद्दा सम्म भेटिन्छन् ।
काठमाण्डौका इट्टा भट्टा देखी मुस्ताङ्गको कथ्याङ्ग्रिने जाडोमा १३ बर्षे नानीहरुले बाटो खनिरहेका छन । भारतको ठूला ठूला शहर देखी उच्च हिमाली भेगमा स्याउ बोकेर गुजारा चलाउने तिनै रोल्पालि छन । मरुभूमि को ५५ डिग्रीमा तातो गर्मीले सेकिएर आफ्नो र सन्तानको भाग्य रेखा खोज्न बाध्य छन्। यि मध्य थुप्रै तिनै तिम्रा ति कथित जनयुद्ध लडेकहरू छन् !
आज तिमीहरूलाई लासको सिढी चढाएर सिंह दरबार पुर्याउने तिनै रोल्पालि होइनन् ?
आफ्नो छोराछोरीको गास काटेर पनि तिमीहरूलाइ सत्ताको रसास्वादन गराउने तिनै रोल्पालि होइनन् ?पानी खाइसके पछि धारा बिर्सन पाइन्छन् ?सोझा साझा जनता भुइँ मान्छे को बलि चढाउने कुख्यात अपराधी तिमीहरू नै होइन ?अहिले पनि सत्ता सनकको शसस्त्र द्वन्दमा गरेका अपराध प्रति नजर अन्दाज गर्न मिल्छ ?अब पनि अपराध बोध नगर्ने?
महमहिमहरुको सत्ता सनकको त्यस युद्धमा कति निर्दोष ब्यक्तिहरु मारिए ! कति घरबार बिहिन भए ! कतिले गाउँ छाडे कति ले समाज त कति ले देश ! बस भित्र जलाइएकी बालिका कजोल हुन वा मादी बस काण्ड ! चितवनमा मारिएका कृस्ण प्रशाद हुन वा गाउँ गाउँमा ढोकाको सङघारमा बोका रेटे झैं रेटेर मारिएका निर्दोष निहत्था युवा युवती हुन ! के उनिहरुले न्याय पाँउनु पर्दैन ?कुना भित्र बसेकी सुत्केरी देखी किरिया पुत्री माथी गरिएको अमानवीय व्यबहारको यहाँ फेहरिस्त दिएर सकिदैन ! तिम्रा सन्तान कालगतिले मर्दा कत्रो पिडा भयो?
के ति मराइएका हजारौं जनता कसैका सन्तान थिएनन् ? खोइ त निर्दोष जनता मार्ने जाल्लादहरु लाई दण्ड सजाय दिएको ?
गाउँमा हजारौं को चिहान बनाएर शहर ओर्लिदै शहरमा आलिसान महल ,महँगो गाडी ,बिलासी जीबन ,यौन दुराचारमा ज्यूनु सामान्य भयो !आर्थिक अपराधमा कहलिएका बिचौलिया र भ्रष्टहरु सङ्ग उठ्बस सामान्य भयो ! हजारौंको रगतको खोलामा बगेर लासको भर्र्याङ् चढ्दै सिंहदरबार सम्मको यात्रा कसको र के का लागि ? आज घाम झैं छर्लङ्गै भएको छ।
तसर्थ अब हामीलाई तिम्रा ति नौटङ्की भाषण चाहिएको छैन। खोक्रो आश्वासन पनि चाहिएन र नयाँ नेपाल पनि चाहिएन । न हामिलाइ सिङ्गापुर चाहिएको छ। न त स्विट्जरल्याण्ड नै। हामीलाई रोल्पा राजधानी पनि चाहिएको छैन । नत तिम्रो कथित समृद्ध रोल्पा । बस हामिलाइ मात्र पुरानै नेपाल र पुरानै रोल्पा नि सर्त फर्काइदेउ। जहाँ शान्त, निर्भिक र सौहार्द रूपमा ढिडो सिस्नु खाएर आफ्नै खेतबारीमा माटोसंग लडिबुडी गर्दै आँगनमा जहान बच्चाहरू संग हाँस्दै बाँच्न पाईयोस। सबै गाउँले समाज मिलेर कुटो कोदालो गर्दै निर्भिकताका साथ भविष्यका निम्ति गोरेटो बनाउन सकियोस।आशा,विश्वास र भाईचाराको वातावरणमा बस्न पाईयोस।
तिम्रा स्वार्थले भरपुर सत्ता तिमीलाई मुवारक !!!!